Basic ngwa na ị na-atụ uche gị Mac | Esi m mac
Imirikiti ndị ọrụ Mac bụ ndị ọrụ "nkịtị", ya bụ, anyị na-eji ngwa anyị iji sọfụ ịntanetị ma chọọ ozi, ide na blọọgụ na-adịghị mma na / ma ọ bụ maka ọmụmụ ihe anyị. Taa, anyị ga-elekwasị anya na ụdị onye ọrụ a, ọ bụ ezie na ha achọghị ngwa dị egwu maka imewe ma ọ bụ dezie, ha chọrọ ahụmịhe kachasị mma na kọmputa ha.
Ọzọ anyị ga-ahụ usoro nke ngwa na ngwa di nkpa; ndị na-enweghị ike na-efu site na kọmputa ọ bụla nke Mac. Na ha ị nwere ike ide ihe ịchọrọ, dowe akwụkwọ gị na kọmputa ndị ọzọ, jikwaa ọrụ gị kwa ụbọchị na ọtụtụ ndị ọzọ. Anyi ka anyi bido?
1 Ngwa ọdịnala
2 Ngwa ndị na-abụghị ndị amaala
Anyị ga-ekewaa isiokwu a na ngalaba abụọ. Na otu aka, nwa afọ Apple ngwa na-ama arụnyere na anyị Mac; n'aka nke ọzọ, ngwa ndị ọzọ nke anyị nwere ike ịchọta n'ime ma ọ bụ n'èzí App Store.
Anyị malitere na ngwa Apple nke ụlọ ọrụ ahụ nyere anyị ugbu a dịka akụkụ nke sistemụ arụmọrụ n'onwe ya. Ndị na-esonụ ngwa Njirimara a ezigbo nhazi na arụmọrụ, gbakwunyere enweghị njikọ site na iCloud na ndị ọzọ nke iOS ngwaọrụ i nwere. Ya mere, Agaghị m akwado ịchọ ụzọ ọzọ Ewezuga ndị ọrụ ahụ nwere ezigbo mkpa.
Iji sọfụ ịntanetị, safari. Amaara m na ọtụtụ n'ime gị ga-eche "gịnị banyere Chrome?" Ihe ọjọọ banyere Chrome bụ na ọ na-eri ọtụtụ ihe onwunwe, ọ bụghị ịkọwa obi abụọ dị na nzuzo. Na Safari ị ga-enwe ọkacha mmasị gị na ibe edokọbara dị mgbe niile na ngwaọrụ gị niile, ndepụta ọgụgụ ị nwere ike iji na-anọghị n'ịntanetị, ị nwere ike mezue ya na ndọtị dị ka Pocket, ad blocker, na na. Na mgbakwunye, ọ na-akwado ọrụ "foto dị na foto".
Ijikwa email gị, mail. Ihe kpatara ya bu otu: nhazi di mfe na ngakọrịta na ngwaọrụ ndi ozo. Enwere tọn ndị ọzọ, mana m na-ahọrọ nke Apple na-enye.
Ihe edeturu iji jikwaa ndetu ngwa ngwa gị kwa ụbọchị, ma ọ bụ iji chekwaa data nnweta na ozi ndị ọzọ dị nro ị nwere ike ichekwa site na paswọọdụ.
Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụ, IBooks Ọ na-enye gị ihe ịrịba ahụmahụ na Mac, na gị akwụkwọ na iCloud (ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ), syncing ndetu na ibe edokọbara, na ndị ọzọ.
KalindaN'agbanyeghị ọtụtụ ndị ọzọ, ọ ka bụ nhọrọ kachasị mma maka onye ọrụ nkezi. Ọzọkwa, njikọta ya na mkpụrụ ndụ nke apụl na-aga n'ihu na-abụ akụnụba ya.
Ngwa ndị na-abụghị ndị amaala
N'akụkụ a, anyị gụnyere ngwa ndị ahụ niile anaghị abịa ọkọlọtọ gụnyere na macOS Sierra, ma ha sitere na Apple ma ọ bụ ndị nrụpụta nke atọ.
Unarchiver (n'efu) bụ ezigbo nhọrọ iji decompress ụdị faịlụ niile. M arụnyere ya na mbụ m MacBook (ihe dị ka afọ isii gara aga) na ọ dịghị mgbe m dara m.
Smart Ntụgharị (n'efu) ihe ntụgharị vidiyo dị mfe maka usoro ọ bụla. Ọ na-enye gị ohere wepụ naanị ọdịyo.
Todoist (n'efu), bụ ngwa njikwa njikwa zuru oke dị adị. Ọ gụnyekwara wijetị maka ebe ngosi. Ọ na-enye ndenye aha mode mana agwalarị m gị na imirikiti n'ime gị agaghị achọ ya.
telegram (n'efu). Ozi dị oke mma, mana ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkọrọ onye ọ bụla, ihe ọ bụla ekwentị ha ma ọ bụ sistemu desktọọpụ ha, Telegram bụ nhọrọ kachasị mma, n’enweghị obi abụọ.
Spotify (n'efu). Ọ bụrụ na ị bụghị onye ọrụ Apple Music, yana Spotify na ọnọdụ ya n'efu, egwu ga-anọnyere gị na Mac gị.
n'akpa uwe (n'efu). Ngwa kachasị mma iji chekwaa ugbu a wee gụọ ma emechaa. Ọ na - arụ ọrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ ị nwere (ọ bụ obe-ikpo okwu) ma na - enye ndọtị maka Safari nke ị nwere ike itinye isiokwu ọhụrụ na naanị otu pịa.
VLC (n'efu) bụ onye ọkpụkpọ na-egwuri egwu ihe niile, n'agbanyeghị usoro.
uTorrent (n'efu), ngwa kachasị mma iji budata ụdị faịlụ iyi niile: akwụkwọ, ihe nkiri, usoro TV, egwu ...
WordPress (n'efu). Ọ bụrụ na ị nwere blog na ikpo okwu a, ya na ngwa ya maka Mac ị ga-enwe obi ụtọ ide ọtụtụ ihe. Ekwere m.
Dropbox (n'efu), ka faịlụ gị niile dị ebe ọ bụla. Ọ na-arụ ọrụ dị ka otu folda ọzọ, n’ezie ọ bụ folda m ‘Documents’. Nhọrọ ị nwekwara ike ịhọrọ Google mbanye o iCloud mbanye.
peeji nke (n'efu site na mgbe ịzụrụ ngwa ọhụụ ọ bụla), "okwu" Apple agaghị ada gị ma nye gị ohere ibubata na mbupụ na usoro Okwu ma ọ bụ PDF, yabụ ị gaghị enwe nsogbu ndakọrịta.
CleanMyMac (ugwo), ihe kacha mma nhọrọ ka ị na-Mac ọcha na iwepụ ndị ngwa ọdịnala na ị na-adịkwaghị eji na-enweghị ahapụ a Chọpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Basic ngwa na-apụghị-efu efu gị Mac
Chrome ga-ebipu oriri nchekwa na ọkara na mbipute 55